Labo nin oo Shiinees ah ayaa Mareykanka ku eedeeyey inay basaaseen shirkado waday cilmi baaris… – Hagaag.com
Labo nin oo Shiinees ah ayaa Mareykanka ku eedeeyey inay basaaseen shirkado waday cilmi baaris…
Posted on 22 Luulyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Wasaaradda caddaaladda Maraykanka ayaa ku eedaysay Shiinaha inuu abaabulo dad jabsada kombuyuutarrada oo beegsaday shaybaarada cilmi baariska ku wada talaallada Covid-19.
Saraakiishu waxay dacwad ku soo oogeen laba nin oo Shiinees ah oo lagu eedeeyey in ay basaasayeen shirkado Maraykan ah oo waday cilmi-baaris ku saabsan fayraska corona isla markaana ay taageero ka helayeen sirdoonka dalkaas oo xataa ay xogo kale xadeen.
Dacwadda raggan lagu soo oogay waxay soo baxday iyada oo Maraykanku dabagal ku hayo basaasiinta internet-ka ee Shiinaha.
Ingiriiska, Maraykanka iyo Canada ayaa sidoo kale todobaadkii hore Ruushka ku eedeeyey isku day xatooyo xogo cilmi-baariseed oo ku saabsan Covid-19.
Dacwaddan lagu soo oogay ardaydaa hore u baranayey cilmiga Electrical Engineering-ka oo la kala yidhaa Li Xiaoyu iyo Dong Jiazhi oo la shaaciyey Talaadadii ayaa waxa ka mid ah xatooyo sir ganacsi.
Xeer ilaalintu waxay sheegtay in labada nin ay basaaseen shirkad ku taal Massachusetts oo ka shaqaysa tiknoolajiyada dawooyinka bishii January, shirkadaas oo la ogaa in ay waday cilmi-baaris ah in dawo loo helo Covid-19. Waxay sidoo kale ay xadeen xog ay lahayd shirkad kale oo ku taal gobolka Maryland todobaad uun ka dib markii ay sheegtay in ay cilmi-baaris ku wado Covid-19.
Waxay hore u xadeen bilowgii sannadkii 2009 sir ganacsi oo “boqolaal milyan oo doolar qiimaheedu yahay, xog hal-abuur iyo xogo kale oo ganacsi oo muhiim ah” ayey sheegtay xeer ilaalintu.
Dacwaddan oo lagu soo bandhigay gobolka Washington ayaa tibaaxday in labada nin oo haatan degan Shiinaha, in ay dhawaan “isku dayeen in ay helaan goldaloolooyinka shabakadaha shirkadaha tiknoolajiyada dawooyinka iyo shirkadaha kale ee dawladda ee la ogyahay in ay ku hawlan yihiin tiknoolajiyada talaalka, dawooyinka iyo baaritaanka Covid-19”.
Dalalka kale ee shirkadahooda la beegsaday waxa ka mid ah Australia, Belgium, Germany, Japan, Lithuania, Netherlands, Spain, Sweden iyo UK.
Xeer ilaalintu waxay sheegtay in raggaasi ay mararka qaarkood keligood falalkaas iyaga oo dano shakhsi ah ka leh ku kacayeen, waxaana ka mid ahayd dhacdo ay shirkad baad kaga qaadeen xog gaara oo ay ka hayeen oo ay ku handadeen in ay faafin doonaan haddaan baad la siin. Laakiin marar kalena “waxay xogo dano gaara laga leeyahay u xadeen” dawladda Shiinaha.
Sida la sheegay waxay xadeen xog milatari waxaanay dowladda Shiinaha siiyeen furayaasha sirta ah ee bogagga baraha bulshada qof u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo Hong Kong jooga horena uga qayb galay mudaharaadkii fagaaraha Tiananmen.
Saraakiisha Shiinuhu ilaa haatan kama ay hadal eedayntan u dambaysay, laakiin hore way u beeniyeen eedaha ah xatooyada xogta hal abuurka.